I-IMEX America sisiganeko sokuqala samazwe ngamazwe ukuvula emva kokunyuswa kokuvalwa kokuhamba kwe-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » I-IMEX America sisiganeko sokuqala samazwe ngamazwe ukuvula emva kokunyuswa kokuvalwa kokuhamba kwe-US
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-IMEX America sisiganeko sokuqala samazwe ngamazwe ukuvula emva kokunyuswa kokuvalwa kokuhamba kwe-US.
Kusele nje iiveki ezimbini ukuya kude kufike i-IMEX yaseMelika, amakhulu abathengi behlabathi, ababonisi kunye nabasebenzi beshishini ngoku baqinisekisile ukubakho kwabo.
Bangaphezu kwama-3,000 abathengi behlabathi ababhaliselwe ukuya kwiIMEX America.
Ngaphezulu kwe-2,200 yeenkampani ezibonisayo, ukusuka kwiindawo, iindawo, amaqela ehotele kunye nababoneleli bezobuchwepheshe, nazo ziqinisekisiwe.
Ukuza ekhaya kolu shishino sisizathu esongezelelweyo sokubhiyozelwa kwimisitho yangokuhlwa equka i-Site Nite eyenzeka kwiResorts World entsha, umsitho weMPI Foundation wotyikityo lweRendezvous eDrais kunye neHolo yeeNkokheli ze-EIC eMGM Grand.
"IMEX yaseMelika sisiganeko sokuqala samazwe ngamazwe esivulwa nje ukuba ukuvalwa kokuhamba kwe-US kunyuswe ngoNovemba 8, kwaye ngokuhlanganisa icandelo elikhulu lemicimbi yezoshishino yehlabathi kunye ne-US kumboniso, sinethemba lokuvula indlela yokuhlaziywa kwecandelo kunye ukuchacha.” UCarina Bauer ujonge phambili kwi-IMEX yaseMelika, eyenzeka ngoNovemba 9 - 11 eLas Vegas.
Ngaphantsi nje kweeveki ezimbini ukuya kude IMEX yaseMelika, amakhulu abathengi behlabathi, ababonisi kunye nabasebenzi bezoshishino ngoku baqinisekisile ukuba baya kubakho.
Bangaphezu kwama-3,000 abathengi behlabathi ababhalisiweyo ukuba bazimase.
Uluhlu lwababonisi olwandisiweyo
Isibhengezo sokuhamba samva nje sase-US siqinise kakhulu ubukho baseYurophu kumboniso ovela kubabonisi kubandakanya iHolland, iIreland, iItali, iSkotlani, iScandinavia kunye neSpain. Umgangatho wokubonisa ujikeleza kuzo zone iikona zomhlaba kunye ne-Australia, Korea, Japan, New Zealand kunye neSingapore phakathi kwamazwe ase-Asia-Pacific, kunye nabanye obunzima behlabathi kuquka i-Dubai, iMorocco kunye noMzantsi Afrika. Bajoyina i-US, iCanada kunye neLatin America ukudala ukufikelela kumazwe ngamazwe ngokwenene. Ezi ndawo zokufikela kwihlabathi jikelele zibonakalisa ukuthandwa, kunye neeshedyuli ezininzi zababonisi zigcwalisa ngokukhawuleza emva kokuba iidayari ziqale ukusebenza.
Indawo yeTech Hub yomgangatho wokubonisa yenye yezona zinkulu, ibonisa uluhlu olubanzi lweenkampani zobuchwepheshe kwaye ibonakalisa ngokukhawuleza ukuba icandelo liye lavela ngokukhawuleza kangakanani kule minyaka imbalwa idlulileyo. Iinkampani ziquka i-Aventri, i-Bravura Technologies, i-Cvent, i-EventsAir, i-Fielddrive BV, i-Hopin, i-MeetingPlay, i-RainFocus kunye ne-Swapcard.
Ihlawulwe 'njengokubuyela ekhaya kushishino', umboniso walo nyaka umiselwe ukuba ube ludibaniso olukhethekileyo: ayilulo uhlelo lwe-10 kuphela. IMEX yaseMelika, umboniso unekhaya elitsha - IMandalay Bay. Ukucwangcisa umboniso kwindawo entsha kuvumele iqela le-IMEX ukuba lijonge ngokutsha uyilo lomboniso kwaye lazise izinto ezithile ezizodwa ezenza imali enkulu IMandalay BayUmtsalane kwaye uphucule amava abantu abazileyo. Enye yezi yi-'Relaxation Reef, eza kubamba inkqubo yezenzo zempilo kwindawo yeShark Reef Aquarium, ikhaya lezidalwa zaselwandle ezingaphezu kwama-2,000. Ezinye zeeseshini zokufunda simahla kulo mboniso ziya kuqhutyelwa kwiindawo ezintle ezingaphandle zaseMandalay Bay.
Imfundo elungiselelwe onke amacandelo
Inkqubo ekhuthazayo, yokufunda simahla eqhutywa kulo lonke umboniso ayifanelanga iphoswe, kwaye yaziswa ngoMvulo oSmart, iqhutywa yiMPI, eyenzeka nge-8 kaNovemba, kusuku olungaphambili. IMEX yaseMelika iqala. UGqr Shimi Kang ovela kwiYunivesithi yaseBritish Columbia uya kuhambisa inqaku eliphambili le-Smart ngoMvulo, ebonisa iindlela zamva nje ezisekelwe kuphando zokuguquguquka, ukusungula izinto ezintsha, ukusebenzisana kunye nempumelelo yeshishini elihlala lihleli.
Iiseshini ezinikezelweyo zamaqela amashishini ahlukeneyo zivumela abantu abazileyo ukuba benze amava abo e-Smart ngoMvulo. Kukho imfundo kunye nothungelwano olulungiselelwe abalawuli bamashishini kuphela kwiQonga leNtlanganiso yesiGqeba - eyenzelwe abalawuli abakwinqanaba eliphezulu kwiinkampani zeFortune 2000 - kunye neNgqwalasela entsha yeNkampani - evuleleke kubo bonke abacwangcisi abavela kumaqumrhu kuwo onke amanqanaba. Iinkokeli zombutho zingaqhagamshela kwaye zifunde kunye noontanga babo kwiForam yobuNkokheli boMbutho, eyenziwe yi-ASAE.
Usuku ngalunye luqala nge-MPI ephambili. Abashukumisi kunye nabashukumayo abavela ngaphandle kweshishini lemisitho yeshishini baya kuzisa umbono wabo wehlabathi owahlukileyo kumboniso kubandakanya umseki wentshukumo yomdaniso wehlabathi kunye noluntu.
I-Inspiration Hub iphinde ibe likhaya ukubonisa imfundo esemgangathweni, ibonelela ngeshedyuli egcweleyo yamathuba okufunda ajongana neemfuno zoshishino kunye neemfuno zezakhono ezichaza ngasekupheleni kuka-2021. Iiseshoni zigubungela uBuchule kunxibelelwano; Ukwahluka kunye nokufikeleleka; I-innovation kunye ne-tech; Ukubuyiswa kweshishini, uthethathethwano lwekhontrakthi, ukuphawulwa komntu kunye noZinzo.
Ukuvuyisana nokubuyela ekhaya kolu shishino
Ngelixa umgangatho wokubonisa uyindawo yeshishini kunye nokufunda, amava e-IMEX America ayaqhubeka kulo lonke elaseLas Vegas. Ukhenketho lweBespoke lubonelela ngokwehla esixekweni nokuba kokona kutya kugqwesileyo, amava ayimfihlakalo okanye umkhondo wangaphakathi weendawo ezimbini ezinophawu: iCaesar's Palace kunye neMandalay Bay. Ukuza ekhaya kolu shishino sisizathu esongezelelweyo sokubhiyozelwa kwimisitho yangokuhlwa equka i-Site Nite eyenzeka kwiResorts World entsha, umsitho weMPI Foundation wotyikityo lweRendezvous eDrais kunye neHolo yeeNkokheli ze-EIC eMGM Grand.
I-IMEX yaseMelika iyenzeka nge-9 - 11 ngoNovemba eMandalay Bay eLas Vegas kunye ne-Smart Monday, inikwe amandla yi-MPI, ngo-8 kaNovemba.